आजदेखि सुरु हुने सेमिफाइनलको पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं । जारी आईसीसी टी–२० विश्व कपमा आजदेखि सुरु हुने सेमिफाइनलको पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दैछन् ।
इओन मोर्गानको कप्तानीमा रहेको इङ्ल्यान्डले सुपर १२ को खेलहरुमा मा समूह विजेता बनेको थियो भने केन विलियमसनको कप्तानीमा रहेको न्युजिल्यान्डले दोस्रो भएर सुपर–१२ का खेलहरू सकेको थियो । दुवै टोलीले समान ४ खेल जितेका थिए ।
र, एक खेल हारेका थिए । आजको विजेता टोलीले बिहीबार हुने पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाबीचको विजेता टोलीसँग फाइनलमा आइतबार भिड्नेछन् ।
जोसन रोयलाई चोटका कारण गुमाउनु इङल्यान्डका लागि ठूलो धक्का हो । यसले जोस बटलरसँग कसले ओपनिङ गर्छ र रोयको ठाँउमा कस्ले खेल्छ ? भन्ने मुख्य प्रश्न छ ।
कसले ओपनिङ गर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको तर नाम अहिले नखुलाउने कप्तान मोर्गानले बताएका थिए । जोनी बेयरस्टो पनि यो प्रश्नका लागि सम्भावित उत्तर हुन सक्छन् । किनभने उनले एकदिवसिय क्रिकेटमा ओपनिङ गर्छन् र उनको टी–२० ओपनरको रूपमा पनि राम्रो रेकर्ड छ । र, पेस र स्पिनविरुद्ध एकदमै राम्रो ब्याटिङ गर्छन् ।
अथवा इङ्ल्यान्डले डेभिड मलान, लाइम लिभिङस्टोन वा मोइन अलीलाई अवसर दिन सक्छ । उनीहरू सबैसँग टी–२० मा शीर्ष क्रममा ब्याटिङ गरेको प्रशस्त अनुभव छ ।
‘हामी शीर्ष क्रममा ब्याट गर्न सक्ने र चाहनेहरू टोलीमा भएकाले हामी भाग्यशाली छौं,’ मोर्गानले भने, ‘यदि तपाईले वरिपरि हेर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै रन बनाएका, ठूला नाम गरेका खेलाडीहरु सबै ब्याटिङ् गर्न चाहान्छन् वा प्रत्येक टोलीमा शीर्ष तीनमा ब्याटिङ गरिरहेका छन् ।’
‘हामी भाग्यमानी यस अर्थमा छौं, किनभने हामीसँग शीर्ष तीनमा ब्याटिङ गर्न चाहानेहरुको लाइन छ, र उनीहरू प्रतियोागितामा ठूलानाम हुन् । र, उनीहरू विपक्षी बलरहरूलाई फेस गर्न चाहन्छन् ।
ओपनिङमा को आउँछ ? भन्ने सन्दर्भमा मोर्गनले भने, ‘यो अवस्थामा निर्भर हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस गुडिरहेको ट्रकबाट खसेर मृत्यु
यदि इङल्यान्डले रोयको स्थानमा अर्को ब्याट्सम्यानलाई खेलाउँछ भने त्यो साम बिलिङ्स हुन सक्छन् । उनी चौथोदेखि सातौं नम्बर जुनसुकै स्थानमा ब्याटिङ गर्न सक्छन् । र, स्पिन अट्याकविरुद्ध उनको प्रदर्शन राम्रो छ ।
तर, इङल्यान्डको चिन्ताको विषय भनेको ‘डेथ–ओभर’ बलिङ हो । दक्षिण अफ्रिकासँग पराजित खेलमा अन्तिम पाँच ओभरमा ७१ रन खर्चेको इङल्यान्डले डेभिड विली, टोम कुरान अथवा रिस टोप्ली मध्य एकलाई बलिङमा उतार्न सक्छ । र, बलिङ अलराउन्डर क्रिस वोक्सलाई सातौं नम्बरमा ल्याउन सक्छन् ।
बलिङ अथवा ब्याटिङजे सुरुमा गरे पनि इङल्यान्डको मध्यक्रम टेस्ट गर्न न्युजिल्यान्डले तिब्र गतिका बलर टे«न्ट वल्ट र टिम साउथीले पहिलो ६ ओभरमा विकेट लिने आशा गरेका छन् । अहिलेसम्म नखुलेको इङल्यान्डको मध्यक्रमलाई एक्सपोज गर्नु न्युजिल्यान्डको आजको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ ।
बाँया हाते बलर बोल्ट ११ विकेटसहित प्रतियोगितामा धेरै विकेट लिने दोस्रो खेलाडी हुन् । जसमध्ये ३ विकेट उनले पावर प्लेमा लिएका थिए । उनले डेथ बलरको रूपमा पनि आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
बटलरले कुल २ सय ४० रन बनाएर प्रतियोगितामा दोस्रो सर्वाधिक रन बनाउने दोस्रो खेलाडी हुन् । सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजाम छन् । उनले २ सय ६४ रन बनाइसकेका छन् । यदि बटलर ६ नम्बर पछि रहेभने इङल्यान्डले ठूलो स्कोर बनाउन सक्छ अथवा न्युजिल्यान्डले दिएको लक्ष्य सहजै चेज गर्नसक्छ ।
इङल्यान्डले अफ स्पीनर अली र सिमर वोक्सले आफ्नो पावर प्ले वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने आशा राखेको छ ।
वोक्सले प्रतियोगितामा अन्य बरलको तुलनामा पावर प्लेमा धेरै बलिङ गरेका छन्, र उनले सुरुआती ६ ओभरमा प्रतिओभर मात्र ५.१ रन दिएका छन् । अलीले अन्य स्पिनरभन्दा बढी बलिङ गरेका छन् र १३ को औसतमा पाँच विकेट लिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ७० हजार भूकम्पपीडित नयाँ आवासमा
के न्युजिल्यान्डले पर्याप्त रन बनाउन सक्छ ?
न्युजिल्यान्डको बलियो पक्ष भनेको बलिङ हो, फास्ट बलर एडम मिल्नेले बोल्ट र साउथीलाई राम्रोसँग समर्थन गरेका छन् । स्पिनरहरू मिचेल सान्टनर र इस सोधीले किवीको बलिङलाई कसिलो बनाएका छन् । यद्यपि इङ्लिस ब्याटरले बुधबार हुने सेमिफाइनलमा दुवै बरको कडा परीक्षा लिने निश्चित छ ।
न्युजिल्यान्डको ब्याटिङमा लगातार ठूलो हिटिङको अभाव छ । ओपनर मार्टिन गप्टिल विपक्षी बलरमाथि हाबी हुने र लगातार ठूला सट प्रहार गर्ने क्षमता राख्छन् । तर, प्रतियोगितामा मुमेन्टम क्याच गर्न नसकेका गप्टिलले कूल १ सय ७६ रन मात्रै बनाएका छन् । त्योमध्ये ९३ रन स्कटल्यान्डविरुद्धको खेलमा जोडेका थिए । न्युजिल्यान्डका लागि कप्तान केन विलियमसनले उत्कृष्ट भूमिका निभाइरहेका छन् । यद्यपि उनी ठूला सटभन्दा पनि बललाई मैदानमै खेलेर रन बनाउने चाहना राख्छन् ।
पाकिस्तानको राम्रो बलिङ अट्याकले न्युजिल्यान्डलाई १२३–८ मा सीमित गरेको थियो । यो पक्कै पनि यो इङल्यान्डले नाटकीय जित निकालेको २०१९ को ५० ओभरको विश्वकप फाइनल दोहोर्याए जस्तै हो ।
‘हामीले एक अर्कासँग धेरै पटक खेलेका छौँ,’ न्युजिल्यान्डका कप्तान विलियमसनले भने, ‘हामीले केही साँच्चै राम्रो सिरिजहरूमा राम्रो खेलहरू खेलेका छौँ । इङ्ल्यान्ड पक्ष र विशेष गरी सेतो बल पक्षहरू विकास धेरै वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण छ । समग्रमा उनीहरूले केही साँच्चै नै राम्रो क्रिकेट खेलिरहेका छन् । हामीलाई थाहा छ यो एकदमै राम्रो चुनौती हो जसबारे हामीलाई छ ।’
२४,कार्तिक.२०७८,बुधबार १६:१९ मा प्रकाशित
← पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४४० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि,४७४ जना संक्रमणमुक्त ६ जनाको मृत्यु
अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता लिनु राम्रो हुन्छ : बामदेव गौतम →